10mm yakawedzera PVC bhodhi
10mm yakawedzera PVC bhodhi inonzi zvakare chena PVC furo bhodhi uye PVC furo bhodhi fenicha, imwe yePVC furo bhodhi kana PVC furo jira. PVC Celuka foam board iri mhando nyowani yemakemikari ekuvakisa zvinhu neunifomu sero chimiro chakagadzirwa nePVC (polyvinyl chloride) resin sechinhu chikuru chakasvibirira, chemakemikari zvinowedzerwa, uye micro-inopupuma extrusion yekugadzira mutsara.
Yakawedzerwa PVC Foam sheet
Yakawedzerwa PVC furo bhodhi isingaremi, yakaoma PVC pepa iro rinoshandiswa kune akasiyana mafomu anosanganisira zviratidzo uye zvinoratidzwa, matembere ekuratidzira, kusimudzira mifananidzo, dhizaini yemukati, thermoforming, prototypes, modhi kugadzira, nezvimwe zvakawanda. Inogona kuvezwa nyore, yakadhindwa, yakabaiwa, ikafa-yakatemwa, yakasungwa, yakaboorwa, yakamonyorwa, yakaroverwa, yakasungirirwa kana yakasungirirwa uchishandisa zvinonamatira zvePVC.
10mm Forex pepa
15mm Forex jira jena, rakakwenenzverwa zvishoma-rakavharwa-sero rakaomarara PVC sheet zvinhu zvine rakanyanya kunaka uye rakafanana sero chimiro uye silky matt huso. Forex jira iri ine akanakisa echimakanika zvivakwa uye yepamusoro-giredhi pamusoro pehunhu. Iyo yakanaka, yakavharwa, inowirirana seyero maseru uye isina kutsetseka, silky mat mat pamusoro inogadzira pvc bhodhi jira chinhu chakanakira zvemhando yepamusoro, yakareba-temu zvemukati nekunze kwekushandisa.
10mm PVC celuka furo bhodhi
10mm pvc celuka furo bhodhi iri rakanyanya kushandiswa muFenicha Indasitiri, Kushambadzira Indasitiri uye Yemukati & Kunze Kunyorera. Ichi chitsva chizvarwa PVC Foam Mabhodhi anogadzirwa achishandisa mwenje huremu hwakaputirwa fovu PVC inova zvakare Eco-Inogadzira chigadzirwa icho chiri Moto Retardant, Mvura & Moister Uchapupu, Gumi & Pest Proof, Corrosion & Chemical Resistant.
yepamusoro Sintra PVC bhodhi
Wood mapurasitiki ematongerwo bhodhi rudzi rutsva rwezvinhu zvinoumbwa izvo zvinokudziridzwa mumakore achangopfuura kumba nekune dzimwe nyika
Zvinopfuura 35% - 70% yeupfu hwehuni, husk yemupunga, mashanga uye imwe tsvina yemicheka yemarara yakasanganiswa mumidziyo mitsva yehuni, ndokuzobuditswa, kuumbwa, jekiseni kuumbwa uye mamwe matekiniki ekugadzira epurasitiki anoshandiswa kugadzira mahwendefa kana profiles. Inonyanya kushandiswa muzvivakwa, fenicha, kugadzirisa zvinhu uye mamwe maindasitiri. Inodaidzwa kuti yakadururwa huni mapurasitiki ematongerwo ebhodhi ayo epurasitiki nehupfu hwehuni zvakasanganiswa mune chimwe chikamu zvobva zvaumbwa neyakaipisa extrusion.
WPC mabhodhi inogona kushanda zvakananga nekuda kwayo kunoshamisa kupedzisa & tekinoroji kusimbisa pamusoro pezvivakwa mukuenzanisa kunyangwe yakanyanya kumanikidza laminate yakaiswa nzvimbo. WPC furo mabhodhi anogona kudhinda zvakananga & UV yakaputirwa pamusoro pekunaka. UV kurapwa pamusoro pechiso kunopa hurefu hupenyu mukuenzanisa neHPL yakavharwa nzvimbo dzePlywood, MDF & Particle mabhodhi.
Eco-inoshamwaridzana Laminated huni PVC furo Mapurasitiki machira WPC furo bhodhi yemidziyo makabati
WPC Sintra Plastic Sheet, iyo zvakare yakatumidza kuti Wooden Plastic Composite bhodhi, ndeimwe yekusika chikamu chePVC furo bhodhi. WPC furo bhodhi inogadzirwa nePVC resin uye huni huni yakasanganiswa pane imwe reshiyo, yakawedzerwa neakasarudzika ekuwedzera nefomura yepamberi, yakapupirirwa furu uye yakadhonzwa pakushisa kwakanyanya pakupedzisira kuita pepa.
China inogadzira pvc huni epurasitiki jira wpc furo bhodhi rekicheni mbichana makabati
PVC huni purasitiki pepa wpc furo bhodhi yekicheni makabati makabati
Wood mapurasitiki ematongerwo bhodhi mhando nyowani yezvinhu zvinoumbwa izvo zvinokudziridzwa mumakore achangopfuura kumba nekune dzimwe nyika.
shava PVC 5mm jira
Bhuruu PVC 5mm jira rudzi rweWPC furo bhodhi. Wood-plastiki bhodhi rudzi rwehuni (huni cellulose, chirimwa cellulose) sechinhu chakakosha zvinhu, thermoplastic polymer zvinhu (plastiki) uye zvigadzirwa zvekugadzirisa, nezvimwewo, wozozvisanganisa zvakaenzana. Iyo yepamusoro-tekinoroji yakasvibirira uye nharaunda-inoshamwaridza nyowani yekushongedza zvinhu zvakagadzirwa nekupisa uye extrusion kuumbwa kwemuchina wemidziyo ine zvimiro uye hunhu hwehuni nepurasitiki. Iyo mhando nyowani yezvinhu zvinoumbwa zvinogona kutsiva huni nepurasitiki.